Deg-Deg: Ubbay Dawiil Iyo Lacag Qalinle Oo Indhaha Loo Shiday Iyo Sh.Bashiir Iyo Macalimow Oo Gacanta Lagu Dhigay. - Cakaara News
Deg-Deg: Ubbay Dawiil Iyo Lacag Qalinle Oo Indhaha Loo Shiday Iyo Sh.Bashiir Iyo Macalimow Oo Gacanta Lagu Dhigay.
Madhaafaan(CN) Axad.Feb.08.2015, "Warjiraaba Cakaaruu iman" geesiyada ciidanka gaarka ah ee DDSI gaar ahaan kuwa sida gaarka ah u tababaran ee rajmantiga 10aad ayaa maanta indhaha u shiday Ubbay Maxamed Sheekh Axmed Waayeel oo looyaqaano Dawiil iyo Ubbay Lacag Qalinle.
Sida uu nooxaqiijiyay halyeey kamida gaantadii hawshan fulisay ayaa noo xaqiijiyay nimankan indhaha looshiday deegaankaas oo ah Madhaafaanka. Sidoo kale waxaa iyaguna gacanta lagu dhigay Ubbay Sheekh Bashiir oo hooyadii uu qabo Cagamardaf adeerkii iyo Ubbay Maclimoow.
Dhiig yacab shuftay Dawiil oo ahaa wakiilkii Tababarada Ubbada u fadhiyay Eretariya muddo 8 sano ah ayaa kamid ahaa hadhaagii dhiig yacabka UBBO ee hantida shacabka iyo dhiigoo da horey u dhici jiray. Sidoo kale Ubbay Lacag ayaa wuxuu ahaa horjoogaha Ubbadii hore ee loo yaqaanay Qudhun-jeex. Sida sawirka ka muuqata ninka bidix waa Dawiil ninka midigta xigana waa Lacag Qalinle. Xubnahan ayaa hada kahor loo sheegay in ay shacabka dhibka kadaayaan oo ay dastuurka dalkana liqaan kaasoo daawo u ah cidkata oo xanuun qabta, horeyna ubbo loogu sheegay inay liqaan.
Warkan ayaa sheegaya in ay xabadu kubilaabatay Ubbadan laguna dhex laayay iyagoo maalaya geela uu Cabdi Faruur ku dhexdarsaday geela Axmed Nashaad (KKKKKKKKKKKKKK).
Guulahan isdaba jooga ah ayaa waxay kusoo hagaagtay xili xukuumada iyoo ciidanka gaarka ah ee DDSI lagu abaalmariyay guulaha ay kasoo hoyiyeen nabadgaliayada iyo horumarka.